အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး » အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ
ကြက်စွပ်ပြုတ် အာဟာရ မိုးတွင်း ကျန်းမာရေး ကိုယ်ခံအား ဗီတာမင် အစာကြေ အရိုးအဆစ် ရောဂါပိုး ကိုဗစ် ကပ်ဘေး ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင် အရေပြား အအေးမိတုပ်ကွေး ဖျားနာ စျေးဝယ်
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ထူးခြားသည့်စားသောက်မှုပုံစံကွဲများ စက်တင်ဘာ 30, 2020 .3mins read
ကလေးတွေဟာ မွေးကင်းစအချိန်ကနေ အသက်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိ မိဘတွေအနေနဲ့ သေချာအနီးကပ်စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 29, 2020 .4mins read
ခြေညှပ်ဖိနပ် အိမ်တွင်းကုထုံးလေး ခြေသည်း ဗီနီကာ ခြေသည်းခွံ ခံတွင်းသန့်ဆေးရည် Tea tree oil အရေပြား ပြဿနာ Oregano oil ဂွမ်းစလေး
အသားအရေနှင့် အလှအပ, လက်သည်းခြေသည်း ထိန်းသိမ်းခြင်း ဇူလိုင် 23, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 14, 2021 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 30, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 11, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 23, 2020 .2mins read